ဒါဇင်ပလပ်စ် နှစ်ပတ်လည်တော့မည်….. :) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ဒါဇင်ပလပ်စ် နှစ်ပတ်လည်တော့မည်….. :)
ဒါဇင်ပလပ်စ် နှစ်ပတ်လည်တော့မည်….. :)
Posted by Shwe Ei on Jun 14, 2013 in Community & Society, Events/Fundraise, Society & Lifestyle | 27 comments
Dozen Plus 11th Donation
မင်္ဂလာဘာ ရွာသူား အပေါင်းတို့ရှင်။
မန်းဂဇက် ရွာကြီးက မွေးဖွါးပေးလိုက်တဲ့ ဒါဇင်ပလပ်စ် ပညာရေးကူညီမှုအဖွဲ့လေး လစဉ် အလှူရှင် (၄၀) ကျော်နဲ့အတူ ခြေလှမ်းမှန်မှန် ချီတက်လာတာ အခုဆိုရင် (၁၁) ကြိမ်မြောက် အလှူတော် အောင်မြင်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ အဖွဲ့လေးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ငယ်ရွယ်တဲ့ မိဘမဲ့ (သို့မဟုတ်) မိသားစုက မပြည့်စုံလို့ ကျောင်းထားမပေးနိုင်တဲ့ ခလေးတွေကို ပညာသင် စောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ သီလရှင်စာသင်တိုက် တွေကို လှူဒါန်းဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။ တတ်နိုင်သရွေ့ပေါ့လေ။
လစဉ်ကျမတို့ အလှူငွေ ၂သိန်းခွဲဝန်းကျင်ထဲကနေ စာရေးကိရိယာ ၀ယ်ခြင်းနဲ့ ငွေသားလှူခြင်းတို့ကို မျှအောင် စီမံပြီး လှူလေ့ရှိပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၉ ရက် ၂၀၁၃ တနင်္ဂနွေ နေ့မှာ ကျမတို့ သံလျင်က ကေသရ၀င်္တ သီလရှင်စာသင်တိုက်ကို သွားရောက်လှူဒါန်းဖြစ်ပါတယ်။ အလှူတော်ငွေ (၂၅၅,၀၀၀)ကျပ် နဲ့ စာရေးကိရိယာအချို့ လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။
ကျောင်းအနေထားအရ သိပ်ချို့တဲ့ပုံမရပေမဲ့ စာသင်သား ခလေးပေါင်း (၃၈၉) ယောက်ကို လက်ခံ သင်ကြားပေးနေပြီး၊ ကျောင်းအိပ်ကျောင်းစား သီလရှင်ဆရာလေး (၁၉၄) ပါးနှင့် သီလရှင် ဆရာကြီး (၆) ပါးတို့ ရဲ့ နေ့စဉ် ဝေယျာဝစ္စစားရိတ်က မသေးလှပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဖိတ်နေ့ ဥပုသ်နေ့ မဟုတ်တဲ့ အခြားရက်တွေမှာ ဆွမ်းခံထွက်ကြရပြီး..တချို့ တချို့သော ဒကာ၊ ဒကာမ တွေက မေးခွန်းထုတ်တာလဲ ခံရပါသေးတယ်တဲ့။
စာသင်သား စတင်လက်ခံတာ (၂၀၀၇) မှာဖြစ်ပြီး အလယ်တန်းသီးသန့်ဘဲလက်ခံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၁) မှာမှ မူလတန်းပါ ပူးတွဲ သင်ကြားပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ အခုလက်ရှိ သင်ကြားပေးနေတဲ့ ခလေးတွေထဲက (၇) တန်းအထိ ကျောင်းသားရှိနေပြီး (၈) တန်း ရောက်ရင်တော့ ကလေးဝ တောရ နန္ဒလိုဏ်ဂူ၊ ကမ္ဘာအေး မှာ ပေါင်းကူးသင်ကြားရေး ကိုဆက်သွားရပါတယ်တဲ့။
ကေသရ၀တီ သီလရှင်စာသင်တိုက်ရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ သင်ကြားအောင်မြင်ပြီး တဲ့ သီလရှင်ဆရာလေးတွေထဲက (၁၀)တန်း ၂ယောက် နှင့် (၉) တန်း ၅ယောက် လူထွက်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းတက်နေပြီလို့သိရပါတယ်။
ဂျပန်အစိုးရ လှူဒါန်းသော ၂ထပ်စာသင်ဆောင်
နောက်လာမဲ့ ဒါဇင်ပလပ်စ်ရဲ့ (၁၂)ကြိမ်မြောက် အလှူနှင့်တကွ ရှေ့ဆက်မဲ့ အလှူခရီးစဉ်တွေမှာ အလှူရှင်တွေ အနေနဲ့ ရော လေ့လာလိုသူတွေပါ လိုက်ပါကြဖို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။
သာဓု ၃ ကြိမ် အရင် ခေါ်သွားပါ၏။
ကိုသွ တို့ လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ ဘာတွေ ဇွတ်မေးနေတာတုန်း::။
ဟိုလူဂျီးကရော ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ မူးနေတုန်းလား:::::
ခေါင်းမူးတာကို ပြောတာပါ။ အဟိ။
တိန်…နဲနဲလျှော့ဘာ ဆွိရယ်….သများ ဒီပို့စ်မှာ ဒါ့ပုံယူသုံးထားတာ..
သဘူတောကျသေးတာမှုတ်ဖူး…အာ..ဟိ (ဟိုလူရီး အဆိုးဆုံး)
သွသွ လေးက ကော်ဖီဖျော်တိုက်တာဘာလေ…တော်ရှာဘာဒယ်..ေိေိ
သူ့ ပုံများ ဒီရွာထဲ အကုန်မြင်ဘူးပြီးသား:::
ကျုပ် ကိုယ်တိုင်လည်း ကြောက်ရသေး::::
ဒီလာတုန်းက ဟာတွေ ဖွမို့ဟာကို ဆူခံရမဆိုးလို့။
အဆူခံရတာ တော်သေး။ ကျုပ် ပုံတွေ ပြန်ဖွမှာဆိုးလို့။
ဒါဇင်ပလပ်(စ) တစ်နှစ်ပြည့်တော့မည်ဖြစ်လို့ အတိုင်းမသိဝမ်းသာမိပါကြောင်း…
နောက်လ ဒါဇင်ပလပ်(စ) တစ်နှစ်ပြည့်အလှူကို ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင်…
တစ်ခုခု စီစဉ်ချင်ပါသည်… ဆွေးနွေးကြ… တိုင်ပင်ကြ… ရန်ဖြစ်ကြပါခင်ဗျား…
သများတို့ ကောင်းအိ ဆိုးအိ ဝေဖန်ပေးဘာ့မယ် :harr:
အော် ..ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေးနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ဗော်လန်ဒီယာ ဆိုလို့ ဗျာ..
အော်…ခေးရယ် သတိရသွားပြီ ကွယ်…။
မဆိုင်တဲ့ အပေါက် ဂလိုင်နဲ့ ၀င်ခေါက်ပျံဘီ….
သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျာ…
ဦးကျောက်မှာက အဝေးရောက်နေသူမို့ ကိုယ်တိုင်မလိုက်နိုင်လို့…
ဒီတခေါက် ပြန်လာရင် လိုက်ခဲ့ဘာ အန်ကယ်ကျောက်….
အလှူရေစက်လေး ထပ်ဆုံရအောင် … မမနှင်းဘာခေါ်ခဲ့….
တစိုက်မတ်မတ် ဇွဲရှိရှိ ညီညီညာညာ စွမ်းဆောင်နိုင်ကြတဲ့ သူတွေမို့ ချီးကျူးပါတယ်။ :hee:
ဒဂယ်တော့ သများတို့ အဖွဲ့က ရန်ဖြစ်လိုက် ပြန်ချစ်လိုက် နဲ့
ရန်တော့ မဖြစ်နဲ့ ပြောလို့မရဘူး။
မအားလို့ မလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်း စိတ်မကောင်ပါဘူး
ဟုတ်ကဲ့…မနိုရေ…အားတဲ့အခါတော့ လိုက်ဖြစ်အောင် လိုက်ခဲ့စေချင်ပါတယ်
စေတနာပြည့်ဝတဲ့ ဒါဇင်ပလပ်စ် အဖွဲ့ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။
သီလရှင်လေးတွေမြင်ရတော့ ရင်ထဲကဆန်ဒ တစ်ခုကိုပြောချင်လာတယ်။ ကျမကလေးတွေကို သီလရှင်။ကိုရင်လေးတွေ မဝတ်စေချင်ပါဘူး။ သာမန်ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲကြီးပြင်းစေချင်ပါတယ်။
အင်း…သာမာန်ကလေးတွေ(လူဝတ်နဲ့ကလေးတွေ)ကို ဘုန်းကြီးတွေ သီလရှင်တွေက ထိန်းကျောင်းဖို့ ပိုခက်တယ် အမရဲ့။ မန်းဂဇက် စတုတ္တအလှူဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာပရဟိတ ကျောင်းလိုမျိုး ကျောင်းသီးသန့်ဖွင့်လိုက်ပြီး ဆရာမ များများ ထားနိုင်ရင်
ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်လဲ ကြီးကြပ်နိုင်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့။
ဘုန်းကြီး သို့မဟုတ် သီလရှင် ယူနီဖေါင်းဝတ်ထားလိုက်တာနဲ့ အနည်းဆုံး
ညစာတနပ်သက်သာသွားတာမျိုး..ကျောင်းအုပ်တွေရဲ့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း အတိုင်းလိုက်နာရမယ်ဆိုတဲ့ အသိလေးတွေ ခေါင်းထဲဝင်သွားတာမျိုးတော့ ရှိတာပေါ့လေ။
ဒါတွေကလဲ ငယ်သေးတဲ့ အရွယ်မှာဘဲ ဖြစ်နိုင်တာပါ။ အသက်ကြီးသွားလို့ လူဝတ်လဲချင်ရင် ပေးလဲရတာဘဲ။ အများနည်းတူ အဖြူ အစိမ်းနဲ့ ကျောင်းတက်ရမဲ့ကိတ်စမျိုးဆို ပိုလို့တောင် ခွင့်ပြုရအုံးမှာလေ။
ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက်အလှူတုန်းက ရွှေပြည်သာ က သီလရှင်ကျောင်းမှာ လသား ခလေးတွေကိုတောင် သီလရှင် ဆရာလေးတွေ ကိုယ်တိုင် ထ်ိန်းကျောင်းနေရတာမြင်ခဲ့တယ်။ ဒီခလေးတွေ ကြီးလာရင် လူဝတ်အတိုင်းသာထားကြည့် ၀တ်ချင်စားချင် လှချင် ပချင် ဖြစ်လာကြအုံးမှာ နဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း သီလရှင်ကျောင်းမှာ နေရတာနဲ့ အံမ၀င် ခွင်မကျတွေ ဖြစ်လာမှာဗျ။
လောလောဆယ်တော့ ကိုယ်တွေလဲ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နေရာဌာနတွေကိုဘဲ လှူနေကျတာဆိုတော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ ကောင်းသည် ဆိုးသည် မဝေဖန်တတ်သေးဘူး။
၀င်ရောက်ဆွေးနွေးတဲ့ အမ lele kyi ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါဇင် ပလပ်စ် ရေ ။
အလှူ အတွက် သာဓု ခေါ်ပါတယ်ကွယ် ။
ရေရှည် စုစုစည်းစည်း လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်လည်း ချီးကျူးပါတယ် ။
ဟုတ်ကဲ့ အဘဖောရေ…ရေရှည်လုပ်နိုင်အောင်လဲ ကြိုးစားနေကြပါတယ်ရှင့်။
ဒါဇင်​ပလပ်​စ်​ရဲ့ ယခုပို့အလှူ မှသည်​ ​နောင်​နှစ်​​ပေါင်း ဒါဇင်​ပလပ်​စ်​အထိ
လက်​တွဲခိုင်​မြဲ ဆက်​လက်​ချီးတက်​နိုင်​ပါ​စေ လို့ဆန္ဒပြုလိုက်​ပါတယ်​ ခင်​ဗျာ။
၁၁ ကြိမ်မြောက်တောင် ရှိသွားပြီနော်။
အခု အလှူအတွက်လည်း ..
သာဓု ခေါ်သွားပါတယ်ဗျို့ …
သြော်………..ဘာလိုလိုနဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်ပြီပဲ………………..အော်……..အချိန်ဆိုတာက ဆပ်ပြာဘူဖောင်းလေး ပေါက်သွားသလောက်ပဲရှိခဲ့တာကို။
@ kyaw hteik
ဟုတ်ကဲ့ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ချင်ပါသည်ခညာ။
ညီးအားရင်လဲ ကျုပ်တို့ အလှူလိုက်ကူလို့ရပါတယ်တော်။
နောက်တကြိမ်လှူမဲ့ နှစ်ပတ်လည်အလှူကျ လိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ခဲ့နော။
ကိုဂ ပလပ်စ် ၀မ်း လို့စာရင်းတို့ထားလိုက်မယ်..ဟိ
လှူမယ့်လှူ. အော်. ခေးရယ်.
ခေးအတွက်. အကို. ကဗျာတွေ စပ်နေဖြစ်တယ် တိယား.
အကိုလို့ ခေါ်ပြီး နော်- နော်- လို့ ပြောတတ်သူကလေးပါဗျာ…
ဟောဒိ နှုတ်ကြမ်း လျှာကြမ်း လူကြမ်း အကုန်ကြမ်း ယီးတွေနဲ့ကတော့
နံ့သာဆီ နဲ့ –ီး
ဘယ်နေ့ ဘယ်မှာ လှုရမှာ
ဟုတ်ကဲ့..ကိုမျိုးသန့်ရေ…facebook account ရှိရင် Dozen Plus Group မှာ join လို့ရပါတယ်။
အလှူမတိုင်ခင် သုံး လေးရက် ကြိုပြီး လိပ်စာ ဆုံရပ် အချိန်တို့ ကို အပြည့်အစုံ ဖေါ်ပြထားပေးပါတယ်။